I-DOOGEE V: Ukunikezelwa kwesiphelo esiphakamileyo kwi-MWC 2018 | I-Androidsis
Inani labavelisi abaya kwi-MWC 2018 likhulu kakhulu. Yiyo le nto eyenza ukuba umsitho ubenomdla, njengoko sidibana neefowuni ezahlukeneyo. I-DOOGEE yenye yeempawu ezininzi eziya kumsitho e-Barcelona. Uphawu lwaseTshayina luyaqhubeka nokufumana ukuthandwa kunye nobukho kwimarike. Ke ngoko, bathatha ithuba loku thaca i-DOOGEE V yakho entsha.
Le fowuni imiselwe ukuba ibe liphawu elitsha lophawu. Ifowuni eneenkcukacha ezipheleleyo kwaye uphawu lufuna ukungena kumacandelo amatsha entengiso. Nangona le DOOGEE V igcina ixabiso elikhulu lemali loo nto yenze ukuba uphawu ludume.
Ifemu ikhethe ukusebenzisa itekhnoloji yakutshanje kwifowuni. Ke sijongane nesixhobo esahluke ngokupheleleyo kuyo yonke into abayenzileyo ngaphambili. Ibalasele ngakumbi ngenxa yenyani inzwa yeminwe eyakhelwe kwiscreen. Into ekuthiwa zizinto ezininzi ebezizamile okwethutyana. Kwaye loo DOOGEE V sele inayo.
Isixhobo sine-6,21-intshi ye-AMOLED yesikrini esine-19: 9 ratio kunye nesisombululo sama-2248 x 1080 pixels.. Ukongeza, yifowuni ethatha ithuba ngaphambili, kuba isikrini sihlala kwi-94,85% yayo. Inani elidlula iimodeli ezininzi kwintengiso.
Inzwa yokudityaniswa kweminwe ekhethekileyo. Kuba isekwe kubuchwephesha bobuchwephesha. Ngale ndlela, imodyuli ye-OLED ikhupha imitha ekhanyisa iminwe yomsebenzisi. Iminwe iyahanjiswa kwicandelo ngescreennjengoko icandelo lingaphantsi kweglasi.
Ngaphandle koko, I-DOOGEE V ine-8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina ngaphakathi. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga neprosesa yayo okwangoku. Ngokubhekisele kwibhetri, isixhobo sinefayile ye- 4.000 mAh ibhetri ngokukhawuleza okukhawulezayo. Ngaphandle kwamathandabuzo ibhetri ethembisa ukunikezela ngokuzimela okuninzi.
Enye yamandla e-smartphone yikhamera yayo yangemva. Ifemi khange ikwazi ukuxhathisa imeko yeekhamera ezimbini. Ke, Sijongene nekhamera ezimbini ngasemva kwe-16 + 8 MP ngeSony sensor. Ke silindele umgangatho ophakamileyo kwimifanekiso.
I-DOOGEE V kulindeleke ukuba ifike kwimarike yaseYurophu ngasekupheleni kuka-Matshi okanye ekuqaleni kuka-Epreli. Akukho nto ityhiliweyo malunga nexabiso layo. Nangona ngokuqinisekileyo kwiiveki ezizayo yonke idatha malunga nefowuni iya kwaziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-DOOGEE V: Iflegi entsha kraca eboniswe kwi-MWC 2018
UToñin Velazquez sitsho
Phendula Toñin Velazquez
IHuawei ikwajoyina inkqubo ye-Android Go